Nhema Chishanu 2015, zvisingamisike zvinopihwa izvo iwe zvausingakwanise kupotsa | IPhone nhau
Nhema Chishanu 2015, zvisingamisike zvinopihwa izvo iwe zvausingakwanise kupotsa
Nacho | | IPhone zvishongedzo
Iwe unogona kunge uchitozviziva izvo Ichi Chishanu iChishanu Chishanu, pati yakatove yakatangwa muSpain seimwe yeakanyanya kukosha egore kuwana zvigadzirwa zvakaderedzwa zvemarudzi ese.
Zvingave sei zvikasadaro, mazhinji eaya anoderedzwa ane hukama chaihwo neiyo iPhone kana nyika yeApple zvakajairika saka tichavaisa mune ino positi. Ramba wakatarwa nekuti pane dzakawanda nguva, inopa kwekupedzisira maawa akati wandei Uye kana ukanonoka, unorasikirwa nemukana wegoridhe wekutora chigadzirwa chakadzikiswa.
1 Inotanga na9: 00
1.1 Aukey charger ine 3 USB: € 11,99
1.2 6.000 mAh bhatiri: € 15,99
1.3 Withings Scale: € 114,99
1.4 Yakagadziriswa Mheni Cable: € 7,19
1.5 5.000 mAh bhatiri ine yakavakirwa-mukati Mheni tambo: € 23,99
1.6 Nyaya nebheteri remukati re iPhone 6: € 14,39
1.7 3W mutauri weBluetooth: € 39,19
1.8 Spigen Slim Armor Nyaya ye iPhone 6s: € 14,99
2 Inotanga na10: 00
2.1 Aukey mota charger ine 2 USB madoko: € 16,99
2.2 Isina mvura Mutauri weBluetooth: € 28,99
2.3 Bluetooth mahedhifoni emitambo: € 12,99
2.4 HupenyuProof Fre Cover: € 39,99
2.5 10W Bluetooth mutauri nemwenje yeLED: € 59,99
3 Inotanga na11: 00
3.1 Bluetooth mahedhifoni emitambo: € 14,89
3.2 Aukey 8000 mAh bhatiri
3.4 Polar H7 moyo wekutarisa yekutarisa: € 48,96
3.5 Iine Activité wachi: 249 €
4 Inotanga na12: 00
4.2 Aukey 5000 mAh bhatiri: € 12,79
4.3 Bluetooth 3.0 odhiyo inogamuchira: € 11,99
5 Inotanga na13: 00
5.1 Nyamavhuvhu Bluetooth mutauri: € 14,36
6 Inotanga na14: 00
6.1 Shaya UP3:
6.2 Aukey Mheni Cable: € 12,79
6.3 Dock ye iPhone neApple Tarisa: € 14,89
7 Inotanga na15: 00
7.1 Xiaomi Powerbank ye5.000 mAh: € 11,98
8 Inotanga na16: 00
8.1 Selfie inonamira neBluetooth kure
8.2 Yekupedzisira Nzeve MEGABOOM Mutauri: € 189,90
8.4 LifeProof Nuud Nyaya ye iPhone 6 Plus
9 Inotanga na17: 00
9.1 Aukey 6.000 mAh bhatiri
9.2 180cm Mheni Cable
9.4 AUDIOMAX Makaralı 4.0 Headband mahedhifoni:
10 Inotanga na18: 00
10.1 Kubhadharisa kumira kwe iPhone uye Apple Watch
11 Mamwe madema eChishanu madhiri
12 Zvipo zvatopedza
Inotanga na9: 00
Aukey charger ine 3 USB: € 11,99
Tchaja akawanda madhijitari kamwechete neiyi Aukey 3 USB charger.
Tenga - Hapana zvigadzirwa zvakawanikwa.
6.000 mAh bhatiri: € 15,99
Usambofa wakapera bhatiri mu iPhone yako nechishongedzo icho chinokutendera iwe kupedzisa akati wandei ekuchaja macircuit efoni yako Apple pasina zvichienderana nepaki.
Tenga - Jackery® 6000mAh
Withings Scale: € 114,99
Kana iwe uchida kuteedzera huremu hwako uchishandisa yako iPhone, iyi WiFi neBluetooth chiyero chakakosha kwauri.
Tenga - Withings Smart Muviri Ongororo
Yakagadziriswa Mheni Cable: € 7,19
Tora tambo yechipiri yeLithgning pamutengo usingadzivisike, ine kureba kwemamita 0,9.
5.000 mAh bhatiri ine yakavakirwa-mukati Mheni tambo: € 23,99
Tenga iyi 5.000 mAh bhatiri ine yakavakirwa-mukati Mheni tambo uye kanganwa nezvematambudziko kana uchichaja yako iPhone chero kupi.
Tenga - Hapana zvigadzirwa zvakawanikwa.EasyAcc PB5000M - External mobile battery (USB, 5000 mAh), nhema »/]
Nyaya nebheteri remukati re iPhone 6: € 14,39
Kune € 14,39 zvinonetsa kuwana kesi yakanaka asi iyo zvakare ine yakavakirwa-mukati 3.200 mAh bhatiri remukati, izvo zvakatonyanya kuomarara. Zvitore.
Tenga - Inodzivirira kesi ine 3200mAh bhatiri
3W mutauri weBluetooth: € 39,19
Amazon inotipa iyo yayo makaralı mutauri pamwe 3W yesimba uye redhiyo redhiyo ine kudzikiswa kwe20%.
Tenga - Inotakurika Makaralı Mutauri
Spigen Slim Armor Nyaya ye iPhone 6s: € 14,99
Spigen inopawo yayo Slim Armor iPhone 6s kesi Inotaridzika nekukwirira kwayo kwekudzivirira uye nekuve nerutsigiro diki rekuisa iyo iPhone munzvimbo dzakasiyana dzekuona mabhaisikopo kana kufonera paInternet.
Tenga - Spigen Slim Nhumbi
Inotanga na10: 00
Aukey mota charger ine 2 USB madoko: € 16,99
Unganidza waya yako yeMheni uye recharge yako iPhone kana iPad mumotokari neiyi mbiri-chiteshi USB charger.
Isina mvura Mutauri weBluetooth: € 28,99
Kana iwe uchida kugeza uchiteerera kumumhanzi wako wakanakisa, tenga uyu mutauri weBluetooth uine redhiyo yakavakirwa uye uimbe pasi pekugezesa.
Bluetooth mahedhifoni emitambo: € 12,99
Teerera kumumhanzi waunofarira zvakanyanya paunenge uchiita mitambo neaya ari-munzeve mahedhifoni neBluetooth yekubatanidza.
Tenga - Bluedio Bluedio H +
HupenyuProof Fre Cover: € 39,99
Dzivirira yako iPhone neimwe yeakanakisa makavha pamusika. Inomira madonhwe anosvika pamamita maviri uye inonyudza mumvura kusvika pamamita maviri futi.
Tenga - LifeProof Fre - Nyaya yeApple iPhone 6 / 6S
10W Bluetooth mutauri nemwenje yeLED: € 59,99
10W yesimba uye nechiedza chinoratidza kurira kwemumhanzi wako waunofarira. Uyu uyu mutauri weBluetooth kubva kuTrust, ikozvino pamutengo usingadzivisike.
Tenga - Kumukira Kwemaguta naTrust Dixxo
Inotanga na11: 00
Bluetooth mahedhifoni emitambo: € 14,89
Isu tinodzokorora mhando yechigadzirwa asi ino nguva yeVicTsing, EC Technology kana Mpow brand. Vamwe munzeve nzeve maBluetooth kudzidzira mitambo usingavimbe netambo dzinogumbura. Ivo vanosanganisira maikorofoni kuti uvashandise semaoko-akasununguka.
Tenga - Hapana zvigadzirwa zvakawanikwa. | EC Technology | Hapana zvigadzirwa zvakawanikwa.
Aukey 8000 mAh bhatiri
Aukey anoenderera mberi nekupa mabhatiri ayo pane anonaka kwazvo madhora nhasi. Ikozvino iko kuchinjika kweiyi modhi iyo inomira pachena kuve yakanyarara kwazvo uye iine chinzvimbo che8000 mAh.
Iwo anozivikanwa Philips LED mababu zvakare ari chikamu cheBlack Chishanu. Chengetedza mwenje wako wepamba kuburikidza ne iPhone nechigadzirwa ichi.
Tenga - Philips Hue
Polar H7 moyo wekutarisa yekutarisa: € 48,96
Kana uri kutsvaga a chiyero chemwoyo chinowirirana ne iPhone, iyo Polar H7 ine Bluetooth 4.0 kuti iwe ugone kutora kurova kwemoyo wako uchitamba mitambo. Inoenderana neese emitambo maapplication akaita seRuntastic kana akafanana.
Tenga - Polar H7
Iine Activité wachi: 249 €
Tevera yako yezuva nezuva chiitiko neiyi inoyevedza wachi kubva kuna Withings. Iwe hausisina chikonzero chekuita chiitiko chebracelet yakadzika mukati mechinyakare wachi.
Tenga - Withings Activité
Inotanga na12: 00
Batidza kana kudzima mudziyo uri kure neiyi Belkin WEMO switch. Iye zvino nechidimbu.
Tenga - Belkin F7C027ea
Aukey 5000 mAh bhatiri: € 12,79
Kana iwe uchitsvaga bhatiri rakanaka kuti utakure uye uine yakanaka yekuchaja kugona, tora mukana weichi chipo kuti utore Aukey's 5000 mAh bhatiri.
Bluetooth 3.0 odhiyo inogamuchira: € 11,99
Tumira chiratidzo cheodhiyo kune chero chishandiso uchishandisa chinongedzo cheBluetooth Iwe unongofanirwa kubatanidza uyu unogamuchira kune wekubatsira wekugashira uye ndizvozvo.
Inotanga na13: 00
Nyamavhuvhu Bluetooth mutauri: € 14,36
Diki asi ine simba, uyu ndiye Nyamavhuvhu Bluetooth mutauri iyo iwe yaunogona ikozvino kutanga kutengeswa.
Tenga - Nyamavhuvhu MS425B
Zvino chii Android Wear inoenderana neIOS.
Tenga - Motorola Moto 360
Inotanga na14: 00
Tenga chiitiko ichi chemaoko neyakavakirwa-mukati yemoyo yekutarisa uye ongorora ako mashandiro nenzira yakapusa uye yakanaka.
Tenga - Jawbone UP3
Aukey Mheni Cable: € 12,79
Unoda tambo yechipiri kubhadharisa yako iPhone? Tora iyi kubva kuna Aukey iyo zvakare ine Apple chitupa.
Dock ye iPhone neApple Tarisa: € 14,89
Tchaja yako iPhone uye Apple Tarisa mudoko rimwe chete neiyi Vtin rutsigiro rwakagadzirwa nealuminium.
Inotanga na15: 00
Xiaomi Powerbank ye5.000 mAh: € 11,98
Kutanga na15: 39 pm unogona kubata iyo Xiaomi PowerBank inomira kunze kune yayo aluminium muviri uye yayo 5.000 mAh kugona.
Tenga - Xiaomi Powerbank
Kana iwe uchida kuve uine akati wandei e LED mababu aunogona kudzora kubva ku iPhone, Ichi kit Philips chakanakira iwe.
Tenga - Philips Hue Lux
Inotanga na16: 00
Selfie inonamira neBluetooth kure
Tora selfie uchishandisa yako iPhone nekuda kweiyi tsvimbo ine yakavakirwa-mukati mebluetooth kure trigger. Izvo zvinoshandawo kune mamwe ma mobiles. Chipo chinotanga na16: 39 PM.
Yekupedzisira Nzeve MEGABOOM Mutauri: € 189,90
Kana iwe uchitsvaga ine simba, yemhando uye inotakurika bluetooth mutauri, usarasikirwa neiyi dhiri kuti uwane iyo yekupedzisira Nzeve MEGABOOM. Chipo chako chinotanga na16: 39 PM
Tenga - Yekupedzisira Nzeve MEGABOOM
Kunyangwe vanga vaine dhizaini imwechete kwemakore (kuhwina mubairo, nenzira), iyo Harman Kardon SoundSticks inoramba iri mudiki. Zvirokwazvo, imwe yeakanakisa 2.1 pamusika. Inotanga na16: 39
Tenga - Harman Kardon Soundsticks III
LifeProof Nuud Nyaya ye iPhone 6 Plus
Kunyangwe iwe uchibata sei yako iPhone 6 Plus, iyo LifeProof Nuud kesi inodzivirira kubva pamadonhwe anosvika kumamirioni maviri uye kubva pakupinda kweguruva, chando kana chando neiri IP-2 chitupa. Inotanga na68: 16
Tenga - HupenyuProof Nuud
Inotanga na17: 00
Aukey 6.000 mAh bhatiri
Kubva pa17: 29 unogona kubata iyi 6.000 mAh kugona Aukey bhatiri.
Tenga - Aukey® 6000mAh
180cm Mheni Cable
iClever inotipa iyo Apple yakasimbiswa Mheni tambo ine kureba kwe180 masentimita. Kana iwe uchida imwe yekuchaja tambo, kubva na17: 39 unogona kuiwana.
Tenga - USB tambo yeApple (1.8 metres)
Na17: 39 anotenga ichi Xiaomi chiitiko chengwena, yakapusa asi yakachipa kwazvo. Kazhinji kazhinji hazvichadiwi.
Tenga - Xiaomi Mi Band
AUDIOMAX Makaralı 4.0 Headband mahedhifoni:
Isu takavaedza paActualiadd iPhone uye zvataifunga zvaive zvakanaka kwazvo. Tora mukana weChishanu Chishanu uye uzviwanire wakasununguka pamusoro-nzeve mahedhifoni ane kukosha kwemari inopfuura mashoma.
Inotanga na18: 00
Kubhadharisa kumira kwe iPhone uye Apple Watch
Tchaja yako iPhone uye Apple Tarisa husiku hwese uchishandisa iyi VicTsing rutsigiro iyo inoderedza mutengo wayo na18: 39.
Mamwe madema eChishanu madhiri
Muchitoro cheMacnificos isu tine mashoma anonakidza anoderedzwa ezve Apple zvigadzirwa:
15% dhisikaundi pane zvishongedzo zveIOS zvishandiso
10% dhisikaundi pane kuchengetedza
10% dhisikaundi pane Mac zvishongedzo
15% dhisikaundi pane RAM ndangariro
En Fnac une 21% dhisikaundi pane zvigadzirwa zvavanotengesa. Rangarira kuti iwe unofanirwa kuve nhengo kuti utore mukana weiyo 21 muzana, zvikasadaro, iyo yakananga dhisikaundi iri 16%.
Chinhu chakashata ndechekuti Apple inosarudzika sechiratidzo asi mune zvishongedzo kana zvimwe zvigadzirwa zvetekinoroji, iwe unogona kutora mukana. Pinda Fnac uye tarisa pane zvakaderedzwa nhasi uye mangwana.
Ktuin anoitawo zvakafanana uye inotipa zvimwe zvinotapira zvinotapira pakutenga zvigadzirwa zveApple. Pamutengo wakazara, hafu yakananga uye imwe hafu inoungana muchiyero chekushandisa muchitoro chako.
10% dhisikaundi pane iPhone
20% kuderedzwa paMacs
20% dhisikaundi pane iPad Mhepo
10% kuderedzwa paApple Watch
Yekupedzisira Nzeve UE BOOM 2: € 129,90
Imwe yei vatauri veblueooth Vazhinji vanozivikanwa nezve kukosha kwayo kwemari, iko zvino kwave kuwanikwa ne38% dhisikaundi. Tora mukana wekuti iko kutenga kukuru.
Tenga - Yekupedzisira Nzeve UE BOOM 2
Bluetooth mahedhifoni emitambo: € 16,86
Kana iwe uchidzidzira chero mutambo uye uchida kuperekedzwa nenziyo dzakanakisa, neidzi Bluetooth mahedhifoni iwe uchakanganwa nezve tambo dziri pakati pe iPhone yako nenzeve dzako.
Bluedio Bluetooth misoro yakaderedzwa ne76%: € 112,99
Kana uchida zvimwe tambo dzisina waya dzemusoro Izvo zvinopa kunaka kurira kwemhando yepamusoro, zvakagadzikana uye pamusoro pezvose zvine akawanda-chiteshi kugona, iyo Bluedio U inogona kuwanikwa nemutengo unosetsa.
Tenga - Bluedio U
TP-Batanidza PLC: € 79,96
Kana iwe uchida uya neInternet yekubatanidza kunongedzo kumba mauri musina kufukidzwa neWiFi kana mukana wekushandisa tambo yeEthernet, iyi PLC iri bheji rakanaka kwazvo uye ikozvino yaderedzwa ne53%.
Tenga - TP-Batanidza TL-PA8030P KIT
Neoprene iPad Mhepo kesi: € 7,59
Tenga - Amazon Basics DZS1311197 ...
Anker Astro E6 20.800 mAh bhatiri: € 35,99
Dzosera iPhone yako nguva zhinji pasina zvichienderana nepaki ine 20.800 mAh yeiyi Anker Astro E6 bhatiri iyo inogona kutengwa ikozvino ne20% dhisikaundi. Kune mamwezve masimba mukana izvo izvo zvinopihwa nemuenzaniso uyu zvinoita sezvakanyanya kukuomera.
Tenga - Anker Astro E6
JBL Pulse Mutauri: € 118,70
Kana iwe uchida mutauri weBluetooth kuti pamusoro pekurira zvakanaka, simudzirawo mapato ako ne LED mwenje show, iyi JBL Pulse inogona kutengwa ne41% dhisikaundi.
Tenga - JBL Pulse
10cm Mheni Cable ine MFi Chitupa: € 5,99
Kana uchida a tambo pfupi yekutakura kana iwe uchienda parwendo, mubhegi rako kana kuti ugare unayo parutivi, iyi kubva kuAmazon Basics ine MFi chitupa uye iri zvakare kupihwa pamutengo wemakwikwi kwazvo.
Tenga - Mheni yekubatanidza tambo 10 cm
Selfie Inonamira ne Remote Shutter: € 11,99
Selfies ndeye fad uye kana iwe usati uine yako, nhasi muenzaniso unonakidza kwazvo uripowo izvo inosanganisira Bluetooth iri kure inokonzeresa kutora mifananidzo kure.
Tenga - Selfie inonamira neBluetooth iri kure
Kunyangwe kuchine mazuva mashoma kuChishanu Chishanu, mamwe zvitoro zvakaita seAmazon zvakatotanga kupa madhora izvo zvakakodzera kutora mukana we. Nhasi tinowana zvinotevera kutengesa:
Inodzoserwa tambo ine Mheni yekubatanidza uye MFi chitupa: € 8,79
Kana iwe uchida tambo yekuchinjisa yako iPhone paunoenda parwendo, ichi chingave sarudzo yakanaka:
Tenga - MFi Certified Inodzoreredzwa Patch Tambo
Vtin Makaralı Mutauri: € 26,30
Iwe haugone kuwana a Makaralı mutauri ane stereo mutsindo uye humwe hunhu hwezvinhu zvemutengo uyu.
Aukey 7.500 mAh bhatiri: € 13,59
Kana iwe uchida recharge yako iPhone, iPad kana chero imwe kifaa Izvo zvinoshandisa iyo USB yekubatanidza, iyi Aukey bhatiri inokuvimbisa iwe mashoma ekuchaja macircuit pasina kuenda kune plug.
Isu tichagadzirisa iyo posvo sezvo zvimwe zvinopihwa zvichibuda, usarase kuzviona
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » Nhema Chishanu 2015, zvisingamisike zvinopihwa izvo iwe zvausingakwanise kupotsa
Nhema Chishanu uye cyber Muvhuro IS muUnited States, usave fungidziro, haufe wakamboona kudzikisirwa kwenyika iyoyo kune imwe pasi.
Wakatadza, pano muBrazil izuva rine mukurumbira, vanoita kutengesa kwakawanda, haugone kufungidzira mitsara pazvitoro zvemagetsi zvemagetsi.
SNAPCHAT's Nhau Yekuongorora inokupa mamwe mapoinzi ekuona